I-Platation Alley House eVacherie, eLouisiana
Ecaleni kweGreat River Road kumbindi welizwe lezityalo, i-Airbnb yakho ikwidolophu encinci yaseVacherie, eLouisiana. Uya kuba phakathi kweemayile ezi-6 kumakhaya angama-5 okulima adumileyo, kubandakanya i-Oak Alley, iSt. Joseph, iLaura, iWhitney, kunye ne-Evergreen.
IVacherie ingaphantsi kweyure yokuhamba ukusuka eNew Orleans naseBaton Rouge, kwaye indlu ikwi-2.4 yeekhilomitha ukusuka kwiBhulorho yeSikhumbuzo seVeteran. IVacherie sisixhobo esibalulekileyo sokumisa kwindawo yakho yokutyala kunye nokhenketho lomlambo eSouth Louisiana.
Eli likhaya labucala, linekhitshi eligcweleyo kunye nempahla ekhoyo. Kubonelelwe ngezinto zokupheka, iziqholo, kunye nempahla yokuhlamba. Ukupaka kulula, kunye ne-driveway egangathiweyo kwaye akukho manyathelo okungena kwigumbi lokulala eli-2, igumbi lokuhlambela eli-2 ekhaya. Sifuna ukwabelana nawe ngenkcubeko yasekuhlaleni ukuze imifanekiso yamakhaya akufutshane ahombise iindonga, ngoko ke siye sathiya i-Airbnb yakho ngokuthi "iNdlu ye-Plantation Alley." Uninzi lweendwendwe zethu zithe kuvakala ngathi zihleli kwaMakhulu.
IVacherie inokuba yeyona mfihlelo igcinwe kwindawo yokulima. I-Vacherie luluntu oluncinci oluneendawo ezimbalwa ezintle zokutya. Uninzi lweendawo zokutyela kunye neevenkile zibekwe ngaphesheya komlambo malunga neemayile ezisi-7 kude, kungekude neziko lokwamkeleka kwiParish yaseSt. Singabakwa-Airbnb bokuqala kule ngingqi, kwaye sineeyunithi ezi-2 kwisakhiwo sethu.
Yonwabela imfihlo yePlantation Alley House! Ndiza kukubonelela ngodibaniso lwephedi, kwaye unokuza kwaye uhambe njengoko ufuna. Ngenxa yezithintelo ze-Covid, asizokubulisa xa ufika. Sikwaphucule iinkqubo zethu zokucoca ukuze sihlangabezane nazo zonke izikhokelo zokhuseleko ze-Covid-19.
Sihlala malunga neekhilomitha ezingama-30 kude kwaye siyafumaneka ukuba sinemibuzo okanye iinkxalabo. Ungasoloko uqhagamshelana nathi nge-inbox yakwa-Airbnb.
Yonwabela imfihlo yePlantation Alley House! Ndiza kukubonelela ngodibaniso lwephedi, kwaye unokuza kwaye uhambe njengoko ufuna. Ngenxa yezithintelo ze-Covid, asizokubulisa xa ufika…